महिलालाई चरित्रहीन भनेपछि बुद्धको जवाफ
काठमाडौं । महात्‍मा गौतम बुद्ध एक गाँउमा पुगे। त्यहाँ उनलाई एक महिलाले सोधिन्, 'तपाई त कुनै राजकुमार जस्तो देखिनुहुन्छ, आफ्नो युवावस्थामा गेरु वस्त्र किन धारण गर्नुभएको ?'
बुद्धले उत्तर दिए, 'मेले तीन प्रश्नको उत्तर खोज्नको लागि संन्यास लिएको हुँ । हाम्रो शरीर युवा तथा आकर्षक छ , तर यो वृद्ध हुनेछ , फेरी रोगी हुनेछ र अन्त्यमा यो मृत्युलाई प्राप्त गर्नेछ । मलाई वृद्धावस्था, रोगी र मृत्युको ज्ञान प्राप्त गर्नुछ ।'
बुद्धले गाँउका मुखियालाई सोधे, 'के यो कुरा सही हो ?' मुखियाले पनि गाँउका मानिसहरुको कुरामा सहमति जनाए ।
तब बुद्धले मुखियाको एक हात समातेर भने, 'अब ताली बजाएर देखाउनुहोस ।' मुखियाले भने' 'यो कसरी सम्भव छ , एक हातले ताली बजाउन सकिदैन ।'
बुद्धले भने, 'ठीक यसै प्रकार कुनै महिला एक्लै चरित्रहीन हुन सक्दिन । यदि यस गाँउका पुरुष चरित्रहीन थिएनन् भने ती महिला पनि चरित्रहीन हुने थिइनन् । यदि गाँउका सबै पुरुष असल हुन्थे भने ती महिला यस्ती हुने थिइनन् यसैले उनको चरित्रको लागि यहाँका पुरुष जिम्मेदार हुन् ।'